bedava deneme bonususlot siteleribitcoin bahisvurkacbahis.comsupertotovip.comtipobetm.combetturkeygiris.orgvenusbetgiris.netKralbet Girişkralbetz.com Ocean Likes Me – Gold Channel Movies
Episode 1 Apr. 26, 2022
Episode2Apr. 27, 2022
Episode3May. 03, 2022
Episode4May. 04, 2022
Episode5May. 10, 2022
Ocean Like Me / 나와 같은 바다(2022)
ပူပြင်းလှတဲ့ နွေခေါင်ခေါင်မှာ ပရိသတ်ကြီးကို အေးမြတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးဆီ ဆွဲခေါ်သွားမယ့် Ocean Like Me ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီကားလေးကတော့ ပင်လယ်ကြီးထံ အိပ်မက်ကိုယ်စီနဲ့ ရောက်လာကြတဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။
Han Ba Da ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကတော့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးဆီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခု စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ရောက်ရှိလာသူပါ။ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို နောက်ခံထားပြီး အူဒုံ(ခေါက်ဆွဲ) ဆိုင်လေးဖွင့်ချင်ခဲ့ပေမယ့် စားသုံးသူမရှိဘဲ အခက်တွေ့နေသူလေးပါ။
Tommy ကတော့ ဂီတပညာရှင်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ဘဲ လေလွင့်လျောက်သွားနေရသူလေးပါ။ နောက်ဆုံးမှာ သူရဲ့ မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ ပင်လယ်ကြီးဆီပြန်လာခဲ့ကာ အိပ်မက်အသစ်ကို အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတော့တယ်။ အိပ်မက်ကိုယ်စီနဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးဆီ ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ ထိုသူတို့နှစ်ယောက်ကို ပင်လယ်ပြင်ကြီးက ဘယ်လိုကြိုဆိုမှာလဲ။
သူတို့နှစ်‌ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်တည်လာမှာလား။ အိပ်မက်ကိုယ်စီကိုမျှဝေရင်း ပင်လယ်မှာလာဆုံကြတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာ ချစ်‌ခြင်းမေတ္တာရော ပေါက်ဖွားလာဦးမှာလားဆိုတာတွေကို GCမှာ စောင့်မျှော်အားပေးရင်း ပင်လယ်ပြင်ရဲ့အလှအပကိုခံစားကာ ပူလောင်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးတွေ အေးချမ်းနိုင်ကြပါစေရှင်။
Original title Ocean Likes Me
First air date Apr. 26, 2022